Ihe karịrị afọ iri gara aga, na Social Media Marketing World, ezutere m ụdị obiọma na amamiihe Emeric Ernoult - onye nchoputa na onye isi nke Agorapulse. The ahịa Social Media njikwa jupụtara na mmadụ. N'eziokwu. Mana Agorapulse na-emeso mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ụlọ ọrụ chọrọ ka ọ bụrụ usoro.
Ọ na-esiwanye ike ịhọrọ ngwa (ma ọ bụ ngwaọrụ) kwesịrị ekwesị maka mkpa anyị. Maka onye ọ bụla (dị ka m) na-anwa ijikwa ọtụtụ akụkọ na-akụ ma mee mkpọtụ na SPAM na ahịa ahịa, Agorapulse na-agbaji mkpọtụ ahụ. Iji mee ka ọ ka njọ, ndị na-ere ngwá ọrụ na-agbanwe onyinye ha na ụdị ọnụahịa ọtụtụ, na-ebulite ọnụ ahịa ma ọ bụ na-esi na ọrụ onwe ha bara uru gaa ọnụego ụlọ ọrụ dị elu.
Enweghị ọgba aghara Inbox. Oge ọ bụla m banyere, ana m ahụ igbe igbe akaụntụ ọ bụla nke nwere akara ngosi ole m na-eche ka m leba anya.
Ndị na-emerụ ahụ - Hụ onye zitere aha ya na profaịlụ ọ bụla akpọrọ. Tinye adabara kpọọ ka categorize gị ọrụ na esịtidem ndetu na-enye gburugburu gị otu.
akuko - Mepụta ngwa ngwa ma kesaa nyocha na miri emi miri emi n'ime mmekọrịta ndị ahịa gị, itinye aka, na uto. Nweta ọtụtụ nhọrọ nhazi.